Ma tihid nasiibka 500 | Martech Zone
Ma tihid Fortune 500
Axad, Abriil 22, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Roger Yu oo ka tirsan USA Today ayaa maqaal uun qoray maalmo ka hor shirkadaha ka tagaya baloog garaynta:
Markii ay soo if baxeen baraha bulshada, shirkado badan ayaa baddellada ku beddelaya aalado nimbler ah oo u baahan waqti iyo kheyraad yar, sida Facebook, Tumblr iyo Twitter.
Maqaalka oo dhami si siman ayuu isu dheellitiran yahay… laakiin xogtu waxay noqon kartaa mid wax yar ka been sheegaysa dhammaan shirkadaha. Marka hore, xogta la tixraacay waxay ka timid shirkadaha xawaaraha badan ee Fortune 500. Tani waa sheekadii hore ee sababaha iyo isku xirnaanta. Shirkaduhu ma waxay ka tagayaan baloog garaynta maxaa yeelay, Istaraatiijiyaddu kama caawineyso inay koraan ama ma waxay ka tagayaan baloog-garaynta sababtoo ah way korayaan?
Weli waxaa jira shirkado badan oo waaweyn oo daabaca cajaa'ib leh baloogyada shirkadaha. Aniguna ma ihi qof dhihi kara in baloog garaynta ay tahay istiraatiijiyad ku habboon dhammaan ganacsiyada. Haddii aad leedahay astaan ​​cajaa'ib leh, wax soo raaca weyn oo aad tahay shirkad soo kordheysa, oo faa'iido leh… waxaad u badan tahay inaad ka gudubto maareynta baloog shirkadeed. Taas macnaheedu maahan xeeladaha ay shirkadaadu geynayso inay yihiin kuwo aan la awoodi karin sida baloogyada shirkadaha… waxaa laga yaabaa inaad waqti iyo lacag badan ku bixiso suuqgeynta kale iyo tamarta xiriirka bulshada sidii aad moodeysay.
Laakiin kama tihid mid ka mid ah shirkadaha ugu xawaaraha koraya Fortune 500, maahan? Shirkadaada ma mid qaran ama caalami ah baa laga yaqaan? Ma laguu arkaa inaad tahay hoggaamiye feker ka haysta warshadahaaga? Ma waxaad tahay summad lagu kalsoon yahay oo awood leh oo warshadu dhegeysato? Miyaad xukuntay natiijooyinka raadinta? Ma leedahay miisaaniyad suuq geyn leh xorriyadda aad ku dhisi karto istiraatiijiyaddaas adigoo adeegsanaya qaabab kale?
Marka la eego ilaha, uma baahnin inaan u qoro shirkadayda, sidoo kale. Waxaan maalgashan lahaa inbadan xiriirka bulshada, kafaalaqaadka, xayeysiinta iyo riixista inaan kahadlo munaasabadaha wadanka oo dhan. Laakiin taasi waa raaxo aanan awoodin. Blogging-ku sifiican ayuu iigu shaqeeyaa maxaa yeelay waxaan galin karaa waqti iyo tamar resources labadaba kheyraad qaali ah laakiin kuwa aan marwalba u arko inaan ku kobciyo ganacsigeyga.
Walaaca aan ka qabo maqaalka ayaa ah, jaleecada hore, shirkadaha inay eegaan qodobkaan oo ay u arkaan inay cudur daar weyn u tahay inaysan u eegin baloog-garaynta inay tahay istiraatiijiyad macquul ah. Go'aanka lagu maalgelinayo istiraatiijiyadda barta wax lagu qoro ayaa aad uga dhib badan marka la fiiriyo waxa loo yaqaan 'Fortune 500'. Blogging is maalgashi waqti-dheer ah oo u baahan u-hureyn, ilo iyo istiraatiijiyad si ay si fiican ugu shaqeyso.
Anigu shaqsiyan waxaan aaminsanahay in shirkadaha badankood ay damaanad qaadaan barta wax lagu qoro maxaa yeelay ma bixiso natiijooyinka degdega ah ee shirkadaha waaweyn qaarkood dalbadaan. Had iyo jeer way fududahay inaad bixiso si aad uhesho feejignaan si aad uhesho feejignaan… su'aasha ma ahan waxa shaqeynaya, waa arrin intee le'eg, intee le'eg iyo sababta aad ugu dari laheyd hal istiraatiijiyad mid kale.
Hal qoraal oo kale, sidoo kale iguma aha wax lala yaabo in xarumaha waaweyn ee warbaahineed ee leh suxufiyiin xirfadlayaal ah, tifaftireyaal iyo kuwa wax daabaca ay wax ka qoraan waxyaabaha diidmada ah ee ku jira qorista qorista. Kaliya sheeg!
Tags: hubkaablogging shirkadahanasiib 500nasiib
6 Erayo Muhiim ah oo Kali ah